Fasan’ny Karana : Polisy roa nosamborin’ny zandary
Polisy roa miasa etsy amin’ny kaomisarian’ny polisy eny amin’ny 67 Ha no nosamborin’ny zandary avy ao amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly maraina, teny amin’ny toby fiantsonan’ny fiara mpitatitra « Fasan’ny Karàna ».
Samy nampiseho ny karatra maha mpitandro ny filaminana ny andaniny sy ny ankilany, saingy nentin’ireo zandary avy hatrany izy ireo. Etsy amin’ny borigady misahana ny heloka bevava (BC) etsy Anosy ireo polisy ireo hatramin’ny omaly.
« Tokony ho tamin’ny 8 ora maraina no niseho ity tranga ity. Avy hatrany dia nambanan’ireo zandary basy izy mirahalahy. Nisy basy ihany koa tany amin’ireto farany, saingy tsy nampiasa izany izy ireo. Nasiana rojovy ireo olona nosamborina avy eo ary taorian’izay izahay no naheno fa polisy izy ireo », hoy ny fitantaran’ny mpanera iray teny an-toerana.
« Naharay vaovao ny polisy avy etsy 67 Ha fa misy olona manana basy, roa lahy izy ireo, ary nosamborina afak’omaly. Nahatrarana basy vita gasy tokoa tany amin’izy ireo, niaraka tamin’ny bala iray. Tamin’ny famotorana dia nilaza izy ireo fa misy olona ho tonga eny amin’ny Fasan’ny karàna hividy ilay basy, ny zoma. Io no nahatongavan’ireo polisy teny hisambotra io olona io », hoy ny tatitry ny kaomisera Ranaivoson Alexandre, lehiben’ny sampana serasera eo anivon’ny polisim-pirenena.
« Nisy nitaraina taty amin’ny zandary fa nisy naka an-keriny ny olona roa. Teny amin’ny toby fiantsonan’ny taksiborosy teny amin’ny Fasan’ny karàna Ankadimbahoaka, no fotoana nolazain’ireo roa lahy ireo fa hanomezana vola 2 tapitrisa ariary ho sandan’ny fanavotana azy ireo. Izay no anton’ny fisamborana teny an-toerana », hoy indray ny avy ao amin’ny zandarimariam-pirenena.
Loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana hafa kosa anefa no milaza fa ilay resaka basy sarona no nahatongavan’ireo polisy teny Ankadimbahoaka, omaly. Voalazan’io loharanom-baovao io fa ny mbola hialan’iretsy roa lahy voalaza etsy ambony, tamin’ny fisamborana niseho afak’omaly, no nitadiavan’izy ireo vonjy sy nilazany fa nisy naka an-keriny izy ireo. Mandeha ny famotorana amin’ity raharaha ity.
Madagascar : Les Centres de Santé de Base de niveau II ont en mains les médicaments pour le traitement du Coronavirus
Madagascar : la ville de Nosy be pourrait ré-ouvrir à l’international
Madagascar : La Brasserie Star suspend sa production
Madagascar : Les gendarmes testés positif de l'ESGN sont guéris
Madagascar : La barre des 10 000 cas de coronavirus atteinte
Madagascar : Les essais cliniques de l'injection artesunate se mettent en place